Mayur Times || मयूर टाइम्स || Authentic news from Nepal, Business Politics Society Art and many more ... » यस्ता गुण भएका पुरुषहरुलाई महिलाले असाध्यै माया गर्छन्
यस्ता गुण भएका पुरुषहरुलाई महिलाले असाध्यै माया गर्छन्
२०७७ चैत १२ गते बिहिबार १०:५१
सामान्यतय महिलाहरु एकदमै भावनात्मक किसिमका हुने गर्दछन् । ससाना कुरामा पनि भावुक हुने उनीहरुको बानी रहेको हुन्छ । उनीहरु आफू जस्तो छ त्यस्तै पुरुषको साथ चाहान्छन् । महिलाले कस्ता किसिमका पुरुषसँग सम्बन्ध राख्न चाहान्छन् त ? हेरौँ...
सामान्यतय महिलाहरु एकदमै भावनात्मक किसिमका हुने गर्दछन् । ससाना कुरामा पनि भावुक हुने उनीहरुको बानी रहेको हुन्छ । उनीहरु आफू जस्तो छ त्यस्तै पुरुषको साथ चाहान्छन् । महिलाले कस्ता किसिमका पुरुषसँग सम्बन्ध राख्न चाहान्छन् त ? हेरौँ तलका केही गुणहरु
साँचो माया गर्ने स् ‘म तिमीलाई धेरै माया गर्छु’ भनेर मात्रै हुँदैन । व्यावहारिक रुपबाटै महिलाहरु कोमल हुने भए’कोले पुरुषहरुबाट बढी मायाको अपेक्षा गर्छन् । उनीसँग संगै बसेर चिया पिउने, कस्तो छ भनेर सोध्नु, जन्मदिनको उपहार दिने जस्ता कार्यले महिलाहरु मख्ख पर्छन् ।
सुरक्षा दिने स् महिलाहरुले आफ्नो पुरुष साथीप्रति चाहना राख्ने अर्को गुण उनीको सुरक्षा गर्न सक्नु । हरेक महिलाहरु आफ्नो पुरुष साथीबाट जुनसुकै अवस्थामा पनि आफू सुरक्षित छुँ भन्ने आभाष गर्न चाहन्छन् । व्यक्तिगत तथा सामाजिक दुवै रुपबाट पुरुषले महिलालाई सुरक्षा दिन सक्नुपर्छ । कुनै पुरुषबाट आफू असुरक्षित छुँ भन्ने लागेमा महिलाहरु त्यस्ता पुरुषको नजिक बस्न चाहदैनन् ।
धैर्यता स् धैर्यवान पुरुषलाई महिलाहरु बढी मन पराउँछन् । यौन सम्पर्कको बेलामा मात्र होइन कि हरेक समयमा पुरुषहरुमा धैर्यता हुनु पर्छ । साना साना कुरामा आत्तिने, चिन्ता गर्ने, एउटै कुरालाई सोचेर बसिराख्ने पुरुष महिलाहरुले मनपराउदैनन् ।
नम्र एवं सहयोगी स् घमण्डी तथा रिसाहा पुरुष महिलाहरुलाई मन पर्दैन । गम्भिर, नम्र र शान्त स्वभावका पुरुषहरु धेरै महिलाहरुले रुचाउँछन् । गफिएर बस्ने, हल्ला गर्ने एवं ठट्टा गर्ने पुरुषहरुलाई महिलाहरुले क्षणिक रुपमा मन पराए पनि लामो समय मन पराउदैनन् ।
सरसफाइलाई ध्यान स् भद्दा लवाई लगाउने पुरुषलाई महिलाहरु मन पराउँदैनन् । सफा र आफूलाई सुहाउँदो लुगा लगाउने पुरुषहरु हरेक महिलाहरुलाई मन पर्छ ।
प्रकाशित मिति १२ चैत्र २०७७, बिहीबार १०:५१